Art Revolution 2010 | News, Art and Ideas For Burma
Art Revolution 2010
Filed under: Election, OTHERS' NEWS — Nyo Gyi @ 9:32 am
အခုဆောင်းပါးနဲ့ တိုက်ရိုက်တော့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ အနှောင့်အယှက်ပေးမိရင် ခွှင့်လွှတ်ပါလို့ ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။ အနောက်ဖက်မှာ ပြည်သူတွေဟာ ကာကွယ်ဆေးကို ယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ကလေးငယ်တွေဟာ ဥာဏ်ရည်နိမ့်ပါးမှု၊ ရောဂါရရှိမှုနဲ့ သေကျေတာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ depopulation လို့ခေါ်တဲ့ လူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စကို မြန်မာတွေ သတိထားဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့လည်း ယူဆမိပါတယ်။ လောဘကြီး.. အတ္တကြီးနေတဲ့ စီးပွားရေးသမားနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေစုပေါင်းပြီး လူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ သတ်ဖို့ကြံစည်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ Bill Gates လိုသူဌေးကြီးဟာ ကျန်းမာရေးစံနစ်ကို အသုံးပြုပြီး လူတွေကို သတ်ဖြတ်ဖို့ လူသိရှင်ကြား ပြောကြားနေပါပြီ။ အောက်ဘက်မှာတော့ သူပြောခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုကို အထောက်အထားအဖြစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Bill Gates says:"The world today has 6.8 billion people. That's heading up to about nine billion. Now if we doareally great job on new VACCINES, health care, reproductive health services, we could LOWER that by perhaps 10 or 15 percent."STRAIGHT UP DEPOPULATION QUOTES FROM THE GLOBAL ELITE:"A total world population of 250-300 million people,a95% decline from present levels, would be ideal."Ted Turner"In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It isahorrible thing to say, but it is just as bad not to say it."J. Cousteau, 1991 explorer and UNESCO courier"We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there aren't enough people left to doagreat deal of ecological damage."Mikhail Gorbachev"World population needs to be decreased by 50%"Henry Kissinger"If I were reincarnated I would wish to be returned to earth asakiller virus to lower human population levels."Prince Phillip☀ Bill Gates EXPOSED! Wants Depopulation Through Vaccines! ☀ Doctor Admits Vaccine Is More Deadly Than Swine Flu Itself & Will Not Give It To His Kids ☀ Dr Oz Will Propagandize For H1N1 Vaccine But He Wont Give It To His Kids☀ Government Scientists Hide Vaccine/Autism Link ☀ SAY NO TO THE VACCINE by trillion ☀ Doctors speak out about H1N1 VACCINE DANGERS ☀ Bill Gates Admits That Vaccines Are Use Used For DEPOPULATION, Not For Making People Healthy ☀ Bill Gates, " Vaccinate to Depopulate": His Logic Explained ☀ Bill Gates Confronted on Eugenics by We Are Change ☀ Fuck The New World Order ★ မြန်မာဆိုတာ မင်းမမေ့နဲ့ ★ ★ မြန်မာဆိုတာ မင်းမမေ့နဲ့ ★ .
Comment by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ — July 19, 2010 @ 5:15 pm
Comment by Nyo Gyi — August 27, 2010 @ 6:49 am
ပြောပါ - ကာတွန်းအော်ပီကျယ်၏ လက်ရာ